Doogee V20: ọnụahịa na ụbọchị ntọhapụ | Ozi gadget
Doogee V20: ọnụahịa na ụbọchị mwepụta
Ụlọ Ignatius | | Mobiles
Otu n'ime ndị na-emepụta smartphone nke lekwasịrị anya n'ọrụ ya na smartphones siri ike bụ Doogee, onye na-emepụta ihe na-emepụta kwa afọ. ngwaọrụ dịgasị iche iche maka mmefu ego niile ma si otú ahụ gboo mkpa nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ.
Onye nrụpụta a ka kwuwapụtala ọnụ ụzọ ọhụrụ ahụ n'ihu ọha. Anyị na-ekwu maka ya Dodge V20, ọnụ nke onye nrụpụta a chọrọ idobe onwe ya dị ka a benchmark na ngalaba ama ama ama ama, ọ bụghị naanị maka nguzogide ya kamakwa maka arụmọrụ ya dị elu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ smartphone siri ike na onye nrụpụta Doogee so na ụdị ndị a na-ewere dị ka nhọrọ, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị. nkọwapụta niile nke Doogee V20 ọhụrụ.
1 Nkọwapụta nke Doogee V20
3 AMOLED ngosi
4 Igwefoto 3 maka ọnọdụ ọ bụla
5 Na-eguzogide ụdị ihe ịma jijiji niile
6 Batrị ụbọchị 2
7 Agba, nnweta na ọnụahịa nke Doogee V20
Nkọwapụta nke Doogee V20
Nhazi 8 cores nwere mgbawa 5G
Ebe nchekwa RAM 8GB LPDDR4x
Nchekwa 266 GB UFS 2.2 - gbasaa ruo 512 GB nwere kaadị microSD
Ihuenyo mbu 6.4-inch AMOLED nke Samsung rụpụtara - Mkpebi 2400 x 1080 - Ratio 20: 9 - 409 DPI - Ọdịiche 1: 80000 - 90 Hz
Ngosipụta nke abụọ Dị n'azụ n'akụkụ modul foto nwere 1.05 inch
Igwefoto azụ 64 MP isi ihe mmetụta nwere ọgụgụ isi Artificial - HDR - Ọnọdụ abalị
20MP ihe mmetụta ọhụụ abalị
Igwe n'ihu 16 MP
Usoro njikwa gam akporo 11
Asambodo IP68 - IP69 - MIL-STD-810G
Kwuonke 6.000 mAh - Na-akwado ịchaji ngwa ngwa 33W - Na-akwado chaja ikuku 15W
Ihe di n’igbe 33W chaja - USB-C eriri USB - ntuziaka ntuziaka - Nchekwa ihuenyo
Ọ bụrụ na ị naghị emeghari ekwentị gị kwa afọ, ị kwesịrị ịmalite ịtụle ohere nke họrọ ụdị 5G.
Agbanyeghị na a ka nwere obere oge maka netwọkụ 5G dị na Spain na mba ofesi, ịnweta ama dị ka Doogee V20 5G ga-enye gị ohere dNwee ọmarịcha ọsọ ịntanetị na ngwaọrụ gị maka afọ ndị na-abịa.
A na-elekọta Doogee V20 site na a 8 isi ihe nhazi, yana 8 GB nke RAM ụdị LPDDR4X ebe nchekwa nke mere na egwuregwu na ngwa na-agba ọsọ na kacha kwere omume.
Banyere nchekwa, isi ihe ọzọ dị mkpa taa mgbe ị na-azụta ama, yana Doogee V20 anyị agaghị ahapụ ya, ebe ọ gụnyere. 256 GB nke ụdị ohere UFS 2.2. Ọ bụrụ na ọ daa mkpụmkpụ, ịnwere ike ịgbasa oghere na kaadị microSD ruo oke 512 GB.
N'ime Doogee V20, anyị na-ahụ gam akporo 11, nke ga-enye anyị ohere ịwụnye ngwa ọ bụla dị na Play Store.
Ụdị gam akporo dị na Doogee V20, gụnyere a oyi akwa nhazi nke pere mpe, n'ihi ya, ọ gaghị abụ ihe mgbagwoju anya iji nweta ihe kachasị mma na ya na-enweghị nhụjuanya na ngwa ndị na-emepụta ihe na-emekarị wụnye na na, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dịghị onye na-eji.
Dị ka ọnụ ahịa ihuenyo na teknụzụ OLED aghọwo ewu ewu, onye ọ bụla ga-achọ inwe ike ịnụ ụtọ àgwà ọ na-enye anyị. Doogee V20 gụnyere a AMOLED ụdị ihuenyo nke Samsung rụpụtara (onye na-emepụta ihuenyo mkpanaka kachasị n'ụwa).
Ihuenyo ruru 6,43 inch na mkpebi nke 2400 × 1080 pikselụ, nchapụta nke 500 nits na ọdịiche nke 80000: 1., njupụta pixel nke 409 na mkpuchi agba nke 105% na NTSC gamut.
Na mgbakwunye, o nwere a 90 Hz ume ọhụrụ. N'ihi ọnụego ume ọhụrụ a dị elu, ma egwuregwu nwere ngwa na ihe nchọgharị weebụ ga-egosi oke mmiri mmiri mgbe anyị na-eji ha.
Ihuenyo n'ihu nke ngwaọrụ a Ọ bụghị naanị ya gụnyere, Ebe ọ bụ na, na azụ, anyị ga-ahụkwa ihuenyo 1,05-inch na azụ, dị n'aka nri nke modul igwefoto.
Enwere ike iji ụdị elekere dị iche iche hazie obere ihuenyo a iji gosi oge, batrị ... na mgbakwunye na inwe ike iji ya kwụghachi ma ọ bụ bulie oku, lelee ọkwa na nchetara… Ọ bụrụ na ị na-enwekarị ekwentị nwere ihuenyo chere ihu na tebụl gị, ụdị ihuenyo a dị mma maka gị.
Igwefoto 3 maka ọnọdụ ọ bụla
Dịka m kwuru n'elu, na azụ nke Doogee V20, anyị na-ahụ a modul foto nke nwere igwefoto 3, Igwefoto nke anyị nwere ike iji kpuchie mkpa ọ bụla anyị nwere mgbe niile, ma n'èzí, n'ime ụlọ, n'abalị ...
64 MP isi ihe mmetụta na ọgụgụ isi. Ọ nwere oghere f/1,8 yana mbugharị anya nke X.
Igwefoto nke 20 MP abalị ọhụụ nke na-enye anyị ohere ịse foto na vidiyo n'ọchịchịrị (ọ na-arụ ọrụ otu igwefoto nchekwa ọ bụla).
8 MP nnukwu obosara nke na-enye anyị akụkụ nlele nke ogo 130, dị mma maka foto nke ihe ncheta, otu ndị mmadụ, ime ụlọ ...
La n'ihu igwefoto Doogee V20 Ọ nwere mkpebi nke 16 MP.
Na-eguzogide ụdị ihe ịma jijiji niile
Ọ bụrụ na ị na-achọ smartphone siri ike na-eguzogide ụdị gburugburu na ihe egwu na-ahapụghị teknụzụ kachasị ọhụrụ, Doogee V20 bụ ekwentị ị na-achọ.
Doogee V20 abụghị naanị nwere asambodo nkịtị IP68 na IP69K, ma gụnyekwara asambodo ọkwa agha, MIL-STD-810.
Asambodo a agaghị egbochi naanị uzuzu uzuzu ma ọ bụ mmiri ịbanye na ngwaọrụ anyị, kamakwa na-echebe ngwaọrụ tupu mgbanwe okpomọkụ na mberede.
Batrị ụbọchị 2
Batrị anyị na-ahụ n'ime Doogee V20 ruru 6.000 mAh, ikike nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ngwaọrụ a mgbe niile maka ụbọchị 2 ma ọ bụ 3.
Ke adianade do, ọ bụ dakọtara na 33W ngwa ngwa site na ọdụ ụgbọ USB-C. Ọ na-akwado chaja ikuku 15W.
Agba, nnweta na ọnụahịa nke Doogee V20
Doogee V20 ga-abata ahịa na February 21 ma mee ya na agba atọ: Knight nwa, wine red y Phantom isi awọ na 2 ụdị emecha: carbon fiber na matte finish.
para mee mmemme mmalite ahịa nke Doogee V20, onye nrụpụta na-enye maka ire ere nkeji 1.000 mbụ na mbelata $ 100 karịa ọnụahịa ọ na-emebu, ọnụ ahịa ikpeazụ ya bụ $299.
El ọnụahịa mbụ nke ọnụ ọnụ aOzugbo nkwalite ahụ kwụsịrị, ọ bụ $ 399.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Doogee V20: ọnụahịa na ụbọchị mwepụta
TicWatch Pro 3 Ultra LTE nke Mobvoi, nyocha dị omimi